SomaliTalk.com » 2012 » March » 02
Home » Archive Maalinta March 2nd, 2012
Fadlan kasoo qayb gal Shir lagu casumay madaxda Gobolka Minnesota iyo labada Bangi ee ugu waawayn gobolkan Wells Fargo iyo Usbank, iyo saxaafada Maxaliga ah, Culimmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waqtigu waa 6:00pm, goobta waa Abubakar As- Saddique Islamic Center. Warbixin kooban: Sida aan dhamaanteen lawada socono waxaa jirtay in Bangiyada waawayn ee Maraykanka ay diideen inay la shaqeeyaan...
Jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfur Afrika ee SASA ayaa manta baaq ku wajahan ganacsatadda soomaalida ah ee dalka koonfur afrika ka soo saartay xafiiskeeda magaaladda Johannesburg. SASA waxeey wax lagu xumaado ku tilmaamtay dhaca iyo boobka soo lab labanaya ee loo geysanayo ganacsatadda soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur Afrika . SASA waxeey farta ku fiiqday boobkii u danbeeyay ee ganacsatadda...